I-NIL PATURIS RANCH - I-Airbnb
I-NIL PATURIS RANCH
Le fama uye okulala ezine, abandwendweli amabini, igumbi ophilileyo, igumbi lokutyela, 29 intshi TV kunye maza, izindlu zangasese ezine, ikhitshi, kwivenkilana kunye kwiindawo, iinkuni esitovini, ifayibha pool kunye leri, ezinkulu abantwana abadala, itheyibhile ngelaphu; eyadini yokuloba , INDAWO YOKUHLALA YABANTU ABAYI-13 KODWA UKUTHATHA IMATtresses KUFANELE NGAPHEZU KWABANTU ABAngamashumi amabini. Iiholide ezinde zijongana namaxabiso ngomyalezo ngamnye. Iintsuku zeveki zishiya ii-R250.00 ngosuku, ingeyiyo iholide.
AWUNOKUPHOSEKA ITHUBA LOKWAZI UKWAZI UBUCHUPHA LWETHU OMNCINANE...
Ifama yosapho entle erentwayo ePederneiras. I-Rancho Paturis da Nil, yindawo apho unokuva khona ngokwenene ukuthula, ukucula kweentaka, umoya omtsha, ukuthanda ukutshona kwelanga kwindawo yeenqanawa, intlanzi, ukuhamba intaba, ukonwabela ichibi nokunye okuninzi. Ipropathi egqwesileyo yexesha, iholide, iiholide kunye neempelaveki.
Le fama uye okulala ezine, abandwendweli amabini, igumbi ophilileyo, igumbi lokutyela, 29 intshi TV kunye maza, izindlu zangasese ezine, ikhitshi, kwivenkilana kunye kwiindawo, iinkuni esitovini, ifayibha pool kunye leri, ezinkulu abantwana abadala, imikhumbi ukuba ukuloba,. Ifama inendawo yokuhlala abantu abangama-20.
Indawo yokuhlala ezele ziifama kufutshane noMlambo iTietê, iibhloko ezimbini ukusuka kwifama, apho sinesitshixo sokufikelela.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, sisesandleni sakho ngokusebenzisa iRancho da Nil.